161 job offers Cho Cho Co., Ltd. in all regions of Myanmar
We found 161 job offers Cho Cho Co., Ltd. in all regions of Myanmar
Yangon (Rangoon) 8518
Yangon Region 1739
Mandalay Region 675
Mandalay City 181
Bago Region 135
Mon State 86
Magway Region 84
Ayeyarwady Region 71
Accountancy Jobs 1149
Admin, Secretarial & PA j... 1152
Arts, Crafts, and Design 169
Audit & Taxation Jobs 157
Construction & Property j... 121
Food & Beverages/Bakery J... 80
HR,Training & Recruitment... 528
Health & Medicine jobs 75
Heavy Equipment /Machiner... 40
IT/Computing Jobs 259
Logistics & Supply Chain ... 571
Maintenance Jobs 36
Marketing & PR jobs 504
Media,Digital & Creative ... 212
Project Management Jobs 114
Quality Assurance Jobs 29
Sales & Business Developm... 245
Sales & Marketing Jobs 1982
Security & Safety jobs 144
Top Management Jobs 9
Trading Jobs 51
About Company : Cho Cho Co., Ltd.
18 Days, Full time , FMCG
[Unicode] •	Delivery Service လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	Computer Word, Excel, Internet & Email ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
[Unicode] •	ကားမောင်းတတ်ရမည်။ •	မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်နှင့် သာကေတမြို့နယ်တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
[Unicode] •	စားသောက်ကုန်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	Computer Word, Excel, Internet &Email ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	မရမ်းကုန်းမြိ� ...
[Unicode] •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။လိုင်စင်လက်ဝယ်တွင် ကိုင်ဆောင်ထားပြီးသူဖြစ်ရမည်။
[Unicode] •ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်ပြီးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရခရီးသွားနိုင်ရမည်။ •ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လက်ဝယ်တွင်ရှိပြီး ကားမောင်းတတ်ရမည်။ •Myanmar ICT Park (လှိုင်) မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	[Zawgyi] •	အဆိုင္းဆင္းႏုိင္ရမည္။ •	လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (သို႕) ႏြယ္ေခြ (ေထာက္ၾကန္႕) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ သူျဖစ္ရပါမည္။ [Unicode] အဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (သို့) နွယ်ခွေ (ထောက်ကြန� ...
•	Able to travel outside of Yangon and Mandalay. •	Strong relation skill in B2B, B2G, B2C. •	Able to work at Myanmar ICT Park.
•	Minimum (3~5) years working experience management in related field as IT/ Fleet Management Software Solutions. •	Able to travel outside of Yangon & Mandalay. •	Able to work at Myanmar ICT Park.
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁)(၂)နှစ်ရှိရမည်။ •	လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နှင့်သာကေတမြို့နယ်တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လိုင်စင်ရှိရမည်